Bubbleplug (sary) karazana fambolena sy fiahiana
Varotra sy karazana bubbleflayer, sary ary famaritana
Satria tsy niantso izany akory!
И American Spiraea calinosaary farany physocarpus kalinolistnym — amin’ny farany Physocarpus opulifolius…
(Physocarpus opulifolius) dia ahitana karazana 14 avy any Amerika Avaratra (ary noho izany Amerikana) sy Azia Atsinanana.
Ny endri-tsarobidy amin’ny endriny rehetra dia ny endriky ny raviny — toy ny ravina viburnum izy ireo, izay nanome ny ampahany amin’ny anarana (saika ny anarana afovoany) mankany amin’io zavamaniry io. Izy ireo dia 3-, 5-lobed (na mihoatra), miaraka amin’ny sisin-kiran-tehezana.
Читать так же: Подпорная стенка на участке с уклоном своими руками
Ny kirihitra dia nahazo ny anarany ho «voamaina» (amin’ny botany — taratasy kely), izay manova ny lokony avy amin’ny maitso maitso ho volompariny mena, manalokaloka ny zavamaniry manakaiky ny fararano. Ao amin’ny voninkazo mahazatra marefo, ny voninkazo dia fotsy, fa ny mena dia miloko mavo. Ny fotsy hoditra ihany koa dia fotsy, na izany aza!
Ny endriny maitso maitso, mazava ho azy, dia tsara ho an’ny heriny, «tsy fetezana» ary fampiasana betsaka amin’ny fananganana lamaody. Na izany aza, andao isika hipetraka amin’ny karazana noforonin’ireo mpamboly sy tompon-tany nandritra ny taonjato roa.
Andeha isika hanomboka amin’ny karazana volo mavo, satria nivoaka voalohany izy ireo. So .
Tany am-piandohana Varavarankely Luteus (Luteus na Aureus — «volamena»)Navoaka tamin’ny tapany faharoa tamin’ny taonjato XIX. Ny ravin-tsofiny dia, araka ny soso-kevitra, ny mavo, izay nahatonga ny fahafahana mamorona akora ho an’ny zana-kazo tsotra sy volomparasy amin’ny zaridaina.
Tao amin’ny aterineto dia nahitako anarana iray toy izao — «zozoro volamena», saingy tsy voatanisa ny antsipiriany . Diabolo d’Or (Diable d’Or). Ny «volamena an’ny Devoly», ary toy izao no fomba ahafahana manova ny anaran’ny karazany, tsy mitovy amin’ny loko kely amin’ny volom-borona mavokely, izay hita mibaribary indrindra rehefa levona ny ravina. Na izany aza, ny fahatsapana dia toy ny hoe mipoitra amin’ny tadin’ny lozam-basy dia tena mahafinaritra. Farany dia misy ravina mavo Harer (Nugget) American selection,
miaraka amin’ny fahazarana bebe kokoa noho ny progenitor — Lutheus.
Eo no misy ny foto-kevitry ny devoly mitoetra ao amin’ny fitantarantsika, miorim-paka amin’ny antsipiriany . ny fisafidianana! Izany no asan’ny orinasa «Cordes» malaza (eny, «Cordes» dia tsy ny raozy ihany!) Nahita karazana mahavariana ny mpikaroka Diabolo (Diabolo). Ity zava-bita ity dia manomboka amin’ny 1998. Io zavamaniry io dia tena manimba ny hatsaran-tarehy — volomparena matevina, indraindray ny ravina mainty hoditra dia manintona ny maso fotsiny.
Ary ireo mpamboly ny Tontolo antitra sy ny tontolo vaovao dia nanisy tanana teo amin’ny famoronana azy ireo.
Novaina varenty Andre (Andre) Mihamamiratra, mamirapiratra kokoa, manankarena noho ny razamben’ny devoly, ndeha lazaina, mahafinaritra kokoa. Ny tanora miala amin’ny faharerahana dia mandoko ny tendron’ireo jirony ao amin’ny tara-pahazavana mena.
Ny hafa ankehitriny Ny karazam-bary amam-bolana (divay mafana, divay fahavaratra) Ny terak’i 2004 dia teraka dia maneho ny fihenan’ny divay taloha, sasao, nefa matevina.
Ny lokon’ny ravin-tsavony amin’ny fahavaratra dia manana alokaloka matevina. Ary tao amin’ny ray aman-dreniny dia nanana ilay Diasora sy Nanus (P. Monogynus) ny endriky ny bladder. Avy amin’ny laharan’ny ray aman-dreny nomen’ny CSNUMX fahamendrehana.
Ny haizin’ny devoly dia mbola mihalalina kokoa amin’ny karazany Red Baron (Baronadona). Mena dia mipoitra amin’ny loko volomparasy, mamorona milina marevaka, lalao misy halavona. Eny, satria ny Baronany, fa tsy ny emperora amin’ny ankapobeny . Etsy andaniny, amin’ny ambaratonga Zolehovka (Zolechovca) Mbola misy ahi-maitso bebe kokoa, saingy tsy nahitako io karazana vary io tao amin’ny trano fivarotanay. Ary misy karazany ihany koa amin’ny sisiny volamena eo amin’ny ravina (Aureomarginatus), saingy tsy nahita azy koa aho.
Amin’ny varotra Nanus.
Eny ary, ampy ny miresaka momba ireo tsipiriany izay iafenan’ny devoly tena izy, mamela antsika hitodika amin’ny toetra voajanahary sy ny tontolon’ny tantara ary ny fampiharana ny maherifontsika.
Ny fitifirana ny bubblefish dia mitranga, amin’ny faran’ny volana Jona. Ny voninkazo dia mivangongo ao anaty bodomamy marevaka hatramin’ny 5 cm lehibe, ny voninkazo dia kely, voaravaka volom-borona. Ao amin’ny isan-karazany Diablo, ny voninkazo dia miteraka fahatsapana mahagaga — manoloana ny lolo volomparasy volomparasy miparitaka amin’ny ranomainty malefaka. Ity fankalazana ny voninkazo ity dia maharitra iray volana eo ho eo!
Bubbleplant — fitsangatsanganana sy fikarakarana
BUBBLES AGRO-TECHNICAL dia mora sy mora. Ny iray dia tokony hikaroka ihany koa ny zavamaniry iray izay manimba ny toe-javatra mihamitombo: ny masoandro, ny alokaloka ampahany, saika misy tany hita any amin’ny zaridaina, ny fanoherana tanteraka ny hafanana, ny fandeferana amin’ny fanongotra mafy.
Ny hany zavatra tokony hialana amin’ny fambolena bala dia tondraka toerana sy toerana misy toerana akaiky ny rano anaty rano, ary koa ny fatra lime (tavy kalesy izany) .
Na eo aza izy dia afaka miaina. Any amin’ny toerana toy izany dia tokony hisy drafitra lehibe kokoa tokony hambolena na tokony hambolena eny amin’ny havoana. Avy amin’ny vazivazy, tsy hilavo lefona ny maherifontsika. Eny, ary ny karazana volo mavo dia tokony hanaraka toerana bebe kokoa. Fa ny «devoly» volomparasy, eny fa na dia eo ambany aloky ny rantsana misokatra aza, dia mampiseho ny fivoarana ara-dalàna sy ny ravina volomparasy azo ekena.
Ary ny volomaso dia manangona loko indray amin’ny fahalavoana — na maitso maitso, na krasnolistny, na mavo mavo — miverina mena, miverena mavo!
Mazava ho azy, ny tena mamiratra indrindra ary, raha milaza izany aho, dia mampiseho ny «karazany» ny voankazo mirehitra amin’ny lohataona. Avy eo dia loko ny lokon’ny ravina. Ary mazava ho azy, ny palette feno ny volom-boasary dia tsy miseho afa-tsy amin’ny fahazoana fahazavana ampy. Ilay Darts Gold Gold mamirapiratra ao amin’ny masoandro dia nivadika ho fotsy maitso tao anaty aloky ny tsy mahazatra .
Reproduction of the bladder
Ny famokarana dia tokony hovana ho toy ny vongan-tany lehibe indrindra araka izay azo atao na amin’ny fiandohan’ny lohataona na amin’ny fararano miaraka amin’ny fanonganana indray ny ampahany amin’ny tifitra. Ny famafazana ny ravina sy ny fandroana amin’ny adaptogens dia tsy hanelingelina.
Fanamboarana sy fametahana blister
IZAY LAZAIN’NY OLONA dia tsy nihaona nandritra ny roapolo taona teo ho eo izy ireo tao amin’ilay hazo balsama. Ny fifehezana ny chlorose dia voavaha amin’ny endriny.
Etsy ankilan’izay, ny clawberry dia zavamaniry tantely mahafinaritra. Ny rantsany marevaka dia mangataka foana ny tantely, ny tantely, ny lobolobo, ny lolo ary ny voangory, toy ny varahina.
Azo atao tokoa ny mamorona «efitrano fonenana» izay manasaraka ny zaridaina amin’ny sombin-dahatsoratra an-jatony avy amin’ny kirany na maimaimpoana maimaim-poana amin’ny blasa clamshell. Raha jerena ny «tsy famonoana» azy, dia zavamaniry tsy azo ovaina ao amin’ny zaridao izany.
Ity zavamaniry ity, toa an’i Gosha avy amin’ny sarimihetsika «Moscow Tsy Mino ny Ranomaso», dia tsy misy ny tsy fahampiana diso . Minoa ahy!